Shan Qodob oo quus ah oo laga fahmi karo warka madaxtooyada Puntland ay soo saartay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 22 April 2021
Maamul Goboleedka Puntland ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyagoo ku goodiyay iney Soomaaliya isaga bixi doonaan oo maamul gaar ah noqon doonaan.
Madaxtooyada Puntland ayaa aad uga niyad jabsan inuu xafiiska sii joogo Madaxweyne Farmaajo waxaana ay u muuqdeen kuwa quus ka taagan rabitaankooda.
Hadaba warka Madaxtooyada Puntland waxaa laga fahmi karaa dhowr qodob oo kala ah:
1:Welwel ay ka qabaan in meesha laga saaro heshiiskii 17 September, siyaasad ahaanna looga gacan-sarraynnayo haddii taasi dhacdo.
2:Wixii ay filayeen oo ahaa cunaqabatayn caalamku ku soo rogo madaxda DF, dagaal Xamar ka dhaca, cadaadis Farmaajo la saaro ilaa uu iscasilo oo ay waayeen, illeen mowqifkooda 10 maalmood kaddib lama sugeen’e.
3:Golaha ammaanka oo muranka siyaasadda Soomaaliya u wareejiyey Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo u ololeysay arrinkaa, kalsooni darrana ay ka qabto PL in dowladda Federalka ah fursad ka hesho halkaas.
4:Qoraalka waxaa ka muuqatay quus, niyad jab, iyo hanjabaad wada socda, iyadoo aad mooddo in loo gooddinayo Isimada, waxgaradka iyo aqoonyahanka Puntland ee qaba aragti ka duwan midda madaxda Puntland ee ku wajahan DF.
5: Farriin lagu aaddinayo kulanka maanta ee golaha amniga iyo nabadda Midowga Afrika ay ka yeellanayaan arrimaha cakiran ee dalka.